Kanada sy Suède ny ankamaroan'ny toerana fitsangatsanganana LGBT
Home » LGBTQ » Kanada sy Suède ny ankamaroan'ny toerana fitsangatsanganana LGBT
Ny fampidirana ny fitoviana eo amin'ny fanambadiana tato ho ato dia nanatsara ny toerana nisy an'i Alemana tao amin'ny SPARTACUS Gay Travel Index, izay mitana ny laharam-pahamehana amin'ireo firenena itadiavana LGBT. Alemana izao dia mizara ny toerana fahatelo amin'ireo firenena iraika ambin'ny folo. Kanada sy Suède no eo an-tampon'ny lisitra. Ny SPARTACUS Gay Travel Index dia havaozina isan-taona ary mampahafantatra ireo mpandeha ny toe-javatra misy ny lesbiana, pelaka, bisexual ary transgenders (LGBT) any amin'ny firenena 197 sy ny Territories.
Sambany tamin'ity taona ity, ny SPARTACUS Gay Travel Index dia mihevitra ihany koa ny toe-draharaha ara-dalàna an'ny olona transgender. Kanada dia nahazo isa feno amin'ity fepetra ity ary afaka mitana ny laharana voalohany amin'ny Index voalohany, miaraka amin'i Suède. Ny firenena folo tsara indrindra amin'ny namana LGBT dia misy firenena maro ao amin'ny Vondrona eropeana izay efa nampiditra lalàna momba ny fitoviana amin'ny fanambadiana, toa an'i The Netherlands, France, Spain ary Belzika. Ny SPARTACUS Gay Travel Index dia mahita ihany koa ny fanatsarana any Israel, Colombia, Cuba ary Botswana. Etsy ankilany, noho ny famonoana pelaka, lesbiana ary transsexual tamin'ny taona 2017, dia naverina ambany ny Brazil raha oharina tamin'ny taona lasa. I Etazonia koa dia eo amin'ny lafiny resy, laharana faha-39 izao fa tsy ny laharana faha-34 teo aloha. Ny ankamaroany dia noho ny fiezahan'ny governemanta Trump hampihena ny zon'ny transgender ao amin'ny tafika ary koa ny fanafoanana ny lalàna manohitra ny fanavakavahana izay natolotry ny governemanta teo aloha.
Amin'ny ankapobeny, Somalia, Arabia Saodita, Iran, Yemen, ny Emira Arabo Mitambatra, Qatar ary Malawi dia nahazo isa ratsy indrindra, ary ny Repoblika Federaly Rosiana Chechnya dia maty farany tamin'ny index, noho ny fanenjehana nokarakarain'ny fanjakana sy ny famonoana ireo lehilahy miray amin'ny taona 2017. mitranga any.
Ny SPARTACUS Gay Travel Index dia natsangana tamin'ny fampiasana critère 14 amin'ny sokajy telo. Ny sokajy voalohany dia ny zon'olom-pirenena. Anisan'izany ny manamarina raha mahazo manambady ny pelaka sy ny lesbiana, na misy lalàna mifehy ny fanavakavahana, na raha mitovy taona na fanekena dia mihatra amin'ny mpivady heterosexual na homosexual. Izay fanavakavahana dia voarakitra ao amin'ny sokajy faharoa. Anisan'izany, ohatra, ny fandrarana ny fivezivezena ho an'ny olona mitondra ny otrikaretina VIH sy ny fandraràna ny filaharam-be na fihetsiketsehana hafa. Ao amin'ny sokajy fahatelo, tombana ho an'ny olona ny fanenjehana, sazy an-tranomaizina na fanasaziana lehibe. Ny loharanom-baovao voamarina dia ahitana ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona “Human Rights Watch”, ny fampielezan-kevitry ny ONU “Free & Equal”, ary ny fampahalalana mandavantaona ny fanitsakitsahana zon'olombelona an'ireo mpikambana ao amin'ny fiarahamonina LGBT.
Ny Air Partner dia manendry mpikarakara Sales Charter Sales vaovao ho an'i Frantsa
Vienna House dia mandefa tsipika momba ny hotely vaovao